Fundamentalisme niteraka fisokafana? Raby Michael Avraham
Fundamentalisme niteraka fisokafana?
Responsa > Sokajy: Filozofia > Fundamentalisme niteraka fisokafana?
Josephon Nanontany 4 taona lasa izay
Tsy fantatro raha nandre momba ny zava-nitranga tato anatin'ny taona vitsivitsy ny raby tao amin'ny vondrom-piarahamonina tsy ofisialy Ba'alei Teshuvah ka hanazava aho ao anatin'ny taona maro raha toa ny ankamaroan'ny Ba'alei Teshuvahs amin'ny endrika fandaozana ny fomba fiaina ultra-Orthodox sy ny ankamaroan'ny olona niova fo dia tsy miditra ao akory.(izaho dia zanak'i Teshuvah izay nihantsy ny ultra-Orthodox) Amin'izao fotoana izao dia toa Ortodoksa maoderina amin'ny toetrany rehetra nefa rehefa mijery ny fomba fihevitr'izy ireo dia afaka mahita ny fundamentalisme mazava. amin'ny finoan'ny vahoaka tsotra mifikitra amin'ny tsipika tsotra ao amin'ny halakhah sy ny maro hafa ary manontany tena aho amin'ny trangan-javatra iray izay mifanohitra tanteraka amin'ny Fundamentalista namorona vondrom-piarahamonina isan-karazany sy misokatra toy izany, dia lazaiko fa noho ny toetran'ny antoko Ba'ath tsy misy lahy sy vavy izany. ratram-po niainan'ny tontolo ultra-Orthodox, raha ny marina, maro amin'ireo mpikambana Batista sendra ahy no mpivavaka maoderina amin'ny lafiny rehetra.
Afaka manazava ny trangan-javatra ve ny raby?
Tags fanontaniana: ט
Mahaliana ny famariparitanao, na dia tsy haiko aza hoe ohatrinona no asehony (tena "ny ankamaroan'ny mpihazona valiny" ve izany).
Misy zava-misy roa manazava eto: 1. fa lasa maoderina. 2. mba hitazonana ny fandikana fondamentalista ny halakhah sy ny finoana.
Tsy azoko antoka ny momba ny fandrindranao. Ny ortodoksa maoderina dia matetika mifandray amin'ny fandikana halakhic mora kokoa. Raha ny famaritana azy, dia toa fibodoana zavatra ho an'ny fivelomanao izany, na famakiana tononkalo sy literatiora, na asa amin'ny zavakanto. tsy mazava amiko.
Mety misy antony maro mahatonga an'izany: ny fahafantarana tontolo hafa (misy safidy hafa alohan'izy ireo). Reraky ny fondamentalisme tafahoatra (fanehoan-kevitra manoloana ny dingan'ny ray aman-dreny amin'ny lafiny iray, ary maka tahaka ny fikomiana amin'ny andaniny). Mazava ho azy fa misy antony ara-tsaina (ny trauma. Tsy nipoitra tamin'ny fomban-drazana ultra-Orthodox izy ireo. Ny ray aman-dreniny koa dia karazana mitady).
Amin'izay fotoana izay dia tsy manana modely ara-pivavahana hafa izy ireo satria manaiky ny laika na ny ultra-Orthodoxisme. Angamba izany no mahatonga ny fiheveran'izy ireo ny halakhah ho ultra-Orthodox.
Ireo fanazavana rehetra ireo dia azo atao, fa ny trangan-javatra dia mendrika ny fandinihana rafitra kokoa.
GIDEONA Namaly 4 taona lasa izay
Matetika ny famerimberenan'ny valiny dia tsy mitranga noho ny antony ara-tsaina, (eny, henoko ny momba ireo "professeur" izay resy lahatra tamin'ny "soatoavina" sy ny "dialogue") ka ny fampiasana ny sainy dia hiteraka fiverenan'ny fanontaniana indray.
mikyab Staff	Namaly 4 taona lasa izay
Fanatanjahantena goavana izany. Saika isaky ny dingana ny olona dia ahitana fiaramanidina maromaro, ara-tsaina sy filozofika. Saingy samy misy ao amin'ny valiny sy amin'ny fivoahana amin'ny fanontaniana.
Hananela On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)